Mamorona photomontage azo tanterahina miaraka amin'ny Photoshop ho an'ny tetik'asa sary misy anao | Famoronana an-tserasera
Mamorona photomontage azo tanterahina amin'ny fampiasana Photoshop
Paul gondar | | sary, Photoshop, Tutorials
Un photomontage azo tanterahina miaraka amin'ny Photoshop Zavatra efa ela no natao tamin'ity programa lehibe ity izay mamela antsika hiara-miasa amin'ny sary toa majika. Na ho an'ny fialamboly na hiasana, Photoshop tolotra valiny tena misy ho an'ny karazana famerenana sary. Mianara mifehy hevitra vitsivitsy mamorona motera misy anao.
Mamorona photomontages anao manokana famoronana mitambatra sary isan-karazany amin'ny fampiasana a fitaovana sary matihanina ampiasain'ny mpamorona, mpaka sary ary mpanakanto sary. Ny ankamaroan'ny dokam-barotra Androany dia vita amin'ireo teknika ireo ary tsy mampino ny valiny. Tsy maninona na matihanina ianao na raha manao izany amin'ny fahafinaretana dia afaka mianatra mamorona sarina sary ary lasa artista.
Para mamorona photomontage ny zavatra voalohany ilaintsika dia ny fananana a hevitra ao an-tsaina hampandroso azy avy eo endrika sary. Betsaka ny fanovozan-kevitra amin'ny Internet izay ahafahantsika mahita mpanakanto isan-karazany hanome aingam-panahy antsika, iray tena mahay amin'ny photomontages ao Joel robinson, ity mpanakanto ity dia manana sanganasa mifototra amin'ny photomontages izay atambany ny fotografia miaraka amin'ny famerenana indray dizitaly (soso-kevitra be ho an'ny aingam-panahy). Afaka mahita ny sasany amin'izany koa ianao pejy.
Raha vantany vao azontsika ilay hevitra, ny zavatra manaraka hataontsika dia ampivoaro amin'ny sary izany.
Raha hatao ny fivoriambe sary azy manokana mila mahafantatra isika lafin-javatra lehibe sasany mba hahazoan'ny fiangonana valiny tena izy. Raha sary avy amin'ny Internet izy ireo, ny zavatra ataontsika dia mitady ny sasany izay mifanaraka amin'ireo toby ireo.
Karakarao ny fomba fijery
Sary miaraka amin'i Buena calidad
Karakarao ny jiro
Ireto teboka efatra ireto dia tena ilaina mba hamoronana photomontage tsara, hazavainay amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny tsirairay amin'izy ireo.
Tandremo ny fomba fijery Tena ilaina ny fananana photomontage antsika zava-misyRaha ny lojika dia tsy maintsy manana fomba fijery mitovy daholo ireo sary montage, na dia miankina amin'ny tetikasa ataontsika aza izany. Ohatra, raha te-hanao montage hametrahana fiadiana amin'ny olona mijery mahitsy isika, ny zavatra marina dia ny fijerintsika sary mitovy fomba fijery eo alohany.
ny SARY tsy maintsy manana ny kalitao mitovy ka ny fusion dia azo tanterahina araka izay azo atao. Miankina amin'ny tetikasa, raha te-hanana kalitao bebe kokoa amin'ny sary isika na tsia, ohatra, mety hilaina ny mombamomba ny manjavozavo raha io no tadiavintsika.
La jiro dia zava-dehibe hanatanterahana izany fikasihan-tena ao amin'ny tetikasanay sary. Rehefa manao ny sary dia manana isika jereo ireo teboka mazava fisorohana ny masoandro mivantana raha any ivelany isika. Raha manana jiro miharo (avy any ambony) ny sary amin'ny Internet ho an'ny montage, dia tokony ho azo antoka fa ao anatin'ny fotoam-pivoriantsika ny hazavana dia manana io fomba fampiasa ao ambadika io ihany koa.
Noho izany ny zavatra voalohany tokony hataontsika mba hamoronana photomontage tsara dia alamino tsara ny pitsopitsony rehetra.
Nanomboka ny photomontage ao amin'ny Photoshop manokatra sary rehetra.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manomboka sary voly, noho izany dia azontsika ampiasaina Fitaovana fifantina Photoshop:
loop (magnetika, polygonal, maimaim-poana)
Raha vantany vao tapaka ny sary, ny zavatra manaraka hataontsika dia ny mampita azy ireo any amin'ny faritra misy antsika photomontage izay halehantsika atambatra ny sary rehetra.
Ny dingana manaraka dia ny manitsy ny toetra ara-batana amin'ny sary: fametrahana ny sary tsirairay, refy ... sns. Mametraka ny sary tsirairay amin'izay alehany isika nefa tsy mifantoka amin'ilay ampahany hita maso, fa ny ampahany ara-batana mamorona ny famoronana fototra fotsiny. Ny hitsin-dalana fifehezana + T Izy io dia ampiasaina hanitsiana ny haben'ny sary.
Raha vantany vao ahitsinay ireo sary, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia loko mifanitsy, noho izany hampiasainay ilay fitaovana fandanjalanjana loko. Tokony ho fantatsika fa ny sary tsirairay dia manana mpandoko loko manokana ary izany no antony tsy maintsy hitovizantsika amin'ny loko roa tonta hahatratrarana ny zava-misy tadiavintsika fatratra.
Tokony hataontsika fantaro hoe iza no loko manjaka amin'ny sarintsika fototra hahafahana mampifanaraka ny loko amin'ny sary rehetra, izany dia azo atao amin'ny fijerena ny sary amin'ny ankapobeny. Raha ity ohatra sary ity dia mena ny loko mibahana azy.
Raha vantany vao nahitsinay ny loko, dia izao manaraka izao marina jiro sy ny mifanohitra. Mba hanaovana izany dia mamorona hazavana hafa sy fanitsiana fanitsiana izay hanampy antsika izahay jiro lalao eo anelanelan'ny sarin'ny montage-nay.
Afaka mampiasa isika sosona fanitsiana hafa para conseguir valiny azo tsapain-tanana kokoa: ambaratonga fanitsiana ambaratonga, sosona fanitsiana fanitsiana voafantina, sosona fanitsiana henjana, sns.
Ny tetika hahatratrarana a photomontage kalitao ny fandaminana tsara ny asa amin'ny fotoana rehetra ary ny fiasana mijery hatrany ireo lafiny rehetra voalaza etsy ambony. Mieritrereta tetikasa iray, alamino ary tanteraho. Ny hany fetrantsika dia ny eritreritsika manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Mamorona photomontage azo tanterahina amin'ny fampiasana Photoshop
Mamorona borosy Photoshop anao manokana
Ny maha-zava-dehibe ny marika arivo taona